China YF-H-806 60 Inch Sideboard Buffet 4-Door Sideboard Isiokwu Kitchen Buffet Manufacturer and Supplier | Yifan
YF-H-806 60 Inch Sideboard nkuru n'onwe 4-Door Sideboard Isiokwu Kitchen nkuru n'onwe
Arịrịọ siri ike: Kwadoro ya na ahịrị geometric na ọla edo ejirila rụọ ọrụ, kabinet a na-enwe ọmarịcha ịchọ mma na okomoko.
Obere ihe eji eme ihe, ihe ndi di nma na ndi ozo di iche iche na-acho onu ogugu nke oge a nke putara na ihe obula ma jiri obi ike mezuo ma ihe eji eme ihe na nke oge a. ụdị.
Site na oghere oghere 180 Celsius ha, ọnụ ụzọ dị n'akụkụ na-enye ohere ịnweta ime.
Hazie ngwaọrụ mgbasa ozi gị, dọọ akwụkwọ kachasị amasị gị na nchịkọta vinyls pụrụ iche. N'ihi nchikota ọnụ ụzọ eji eji iko emebere na bọọdụ nwere ike igosipụta ihe ị na-anya isi na zoo ihe ịchọrọ idobe. A nwekwara ọgụgụ isi cutout n'azụ na-ahapụ gị hazie niile tangled Gịnị. Debe gramophone, TV, nka kachasị amasị gị n'elu ma nwee ọmarịcha ime ụlọ.
Nnukwu Nchekwa: Ọnụ ụzọ 4 meghere iji kpughee mpaghara ime ụlọ 6 nke na-enye ọtụtụ ohere maka nchekwa, gụnyere akwa linen gị, efere, na nchịkọta kichin ndị ọzọ. Tinye n’ime tebụl gị kwa ụbọchị, textiles na folda faịlụ kachasị amasị gị. Echefula igosipụta ngwa gị kachasị amasị gị n’elu akụkụ ahụ nke na-enye ime gị ụdị agwa ọ bụla. Ogwe osisi ya dị elu, nke na-enye mbara ụlọ a ohere nghọta.
Inogide Ọdịdị: Igba etu esi mepụtara osisi a rụpụtara nke nwere iko dị egwu na igwe anaghị agba nchara, ọ na-enye ohere ọrụ na-adịte aka yana ọkaibe na-adịghị agafe agafe.
A na-ejizi arịa anyị niile arụ ọrụ nke pụtara na mpempe akwụkwọ niile adịla njikere iji ya. Nzukọ ikpeazụ na-ejikọta njikọ ndị a ọnụ site na iji njikọ pụrụ iche etinye na ngwongwo niile. Usoro a dị mfe ma ọ chọghị ngwaọrụ pụrụ iche.
Nke a na ngwá ụlọ bụ ewepụghị-juru n'ọnụ na-emesi obi ike n'oge njem, mfe eweli na ebu ka mbenata carbon akara ukwu. Ngwunye n'onwe ya bụkwa ebe obibi-enyi na enyi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iji plastik eme ihe.
Nke gara aga: YF-H-805 High End Italian Quilted Designer Marble nkuru n'onwe
Osote: YF-H-807 Contemporary Italian Lacquered Designer Igbe Of Drawers